Monsoons any India ho an'ny mpizahatany
Ny fotoanan'ny rotsakorana any India dia azo antoka a traikefa mandritra ny androm-piainana satria ny faritra mahavariana dia mamela anao hipnototra amin'ny hakantony. Ny lemaka sy ny tendrombohitra rakotra maintso maitso, ny farihy tototry ny rano manjelanjelatra, lasa ambony ny fijerena ny cascade hahatonga anao manomboka mijery maso feno kintana any India Mampino.
Mila ianao Mpizaha mpizaha tany Visa (e India or Visa Indiana Online) handray anjara amin'ny fahafinaretana amin'ny maha olom-pirenena vahiny any India. Mila mahazo antoka ianao fa ny Fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny India visa ary Fangatahana sary India Visa no mihaona alohan'ny hangataka Fampiharana Indiana Visa mba hialanao aminy Famoronana Visa Indiana. The Governemantan'i India mamporisika ny mpitsidika any India hangataka fangatahana Visa Indiana Online (eVisa India) amin'ny tranonkala fa tsy mitsidika ny Kaonsily indianina na masoivoho indiana.
Raha mitovy daholo aminao dia iray amin'ireo olona izay tia mando amin'ny orana, avy eo, ireo toerana folo mahavariana hitsidihana tafio-drivotra any India ireo dia mety amin'ny fanandramana espresso mafana sy fankasitrahana ireo fitsaboana malaso indianina: Lonavala, Goa, Kodaikanal, Andaman And Nicobar Islands, Coorg, Munnar, Ladakh, Udaipur, Himachal Pradesh ary Shillong.
Mipetraka any Mumbai ary mieritreritra ny toerana tsara indrindra hitsidihana an'i India mandritra ny vanim-potoanan'ny blustery. Raha dinihina ny zava-drehetra, misy iray akaiky anao - Lonavala! Tamin'ny fiandohan'ny tafio-drivotra, ny Tandavan-tendrombohitra Sahyadri ary ny matoatoa mamerina amin'ny ala maitso manintona, cascade mahatalanjona ary rivo-piainana mahafinaritra. Raha mila miala haingana amin'ny tanàn-dehibe ianao, dia manomàna fivoahana mankany amin'ny tanàna mitoby ao Lonavala.
Mety amin'ny: Fitiavana voajanahary
Activities: Fitsangantsanganana, fitsangantsanganana, any ivelany, fitsangatsanganana amin'ny soavaly
fenoy Fampiharana Indiana Visa alohan'ny hitsidihanao an'i Lonavala.
Goa dia ho anisan'ny toerana tsara indrindra hitsidihana mandritra ny vanim-potoanan'ny oram-baratra (orana) any India. Ny toerana fantatra amin'ny moron'ny ranomasina dia tsy isalasalana fa mendrika fitsidihana mandritra ny tafio-drivotra mba hankasitraka fasika, fandroana ary fomba fijery mahafinaritra. Izy io no toerana mety indrindra handraisana ny oram-batravatra sy hankasitrahana ny tena marina indulgences Goan mahafinaritra.
Mety amin'ny: Fitiavana voajanahary, mpankafy traikefa, olon-tiana amoron-dranomasina, mpiorina bibidia
Activities: Ski jet, scuba, fitsangatsangana, fitsidihana lova, fiantsenana, fitsidihana vorona
Fantatra amin'ny "Princess of Hill Stations" miavaka io eo amin'ireo toerana manintona Monona any India. Narindra ao amin'ny Havoana Palani any andrefana manolotra cascades mahafinaritra, farihy ary ala maitso mandavantaona sy fomba fijery mahavariana momba ireo matoatoa sy tehezana izy.
Activities: Sambo, fitsangantsanganana, fitsangatsangana
Nosy Andaman sy Nicobar
Fivondronan'ny nosy efa ho 570, misy ity faritra midadasika ity fiainana untamed manaitra, fanatanjahantena amin'ny rano mahaliana ao Andaman, morontsiraka amoron-dranomasina fasika tsy misy kilema, tendrombohitra, hatsarana ara-dalàna mahavariana sy fitsidihana razana. Ity toerana ity dia tsy hijanona tsy hanadino anao velively ary azonao antoka fa ho lasa tsy manam-pitiavana ianao noho ny hatsarany tsy takatry ny saina. io dia tsy maintsy takiana tsy azo iadian-kevitra amin'ny fandefasana tsara indrindra anao Toeram-pizahàn'ny mononta ao India.
Mety amin'ny: Fitiavana amoron-dranomasina, olon-tiana voajanahary, mpanolotra traikefa
Activities: Ski jet, fitsangantsanganana, scuba, lomano, fitsangatsanganana
Fantatra amin'ny rakotra hazondamosiny matevina, izy io koa dia mameno toy ny toerana iankinan'ny harena voajanahary mampiseho karazana zavamaniry marobe. Ity tanjona ara-pientanam-po ity dia manolotra cascade, farihy, tany espresso goavambe, ary sakafo matsiro hanintonana ny tsironao.
Activities: Fitsangantsanganana an-tongotra sy elefanta, fijerena vorona, mitaingina soavaly, fitsidihan'ny kafe
Atsofohy amin'ny lalana maina sy mafana no nifangaroan'ny mpiala sasatra ary mivoaha mandritra ny vanim-potoanan'ny oram-baratra!
Ny toetrandro no lohalaharana amin'ny eritreritry ny olona rehetra rehefa handeha amin'ny toeran-kafa. Hangatsiaka ve izany? Mampijaly ve ny hafanana? Mety ve raha ho ahy ny manangona mpiambina orana mandritra ny andro blustery? Mifandraisa hatrany amin'ireo fanavaozana farany momba an'i India amin'izany tranonkala araka ny nohavaozina avy amin'ny Ofisialy Governemantan'i India biraon'ny fifindra-monina.
Afaka manao izany ianao alefaso alohan'ny fotoana ny fialan-tsasatrao miaraka amin'ny faniriana hotehirizin'ny Reny Natiora amin'ny toetr'andro afovoany. Na izany na tsy izany, filokana satria tsy tia drafitra ny natiora.
Ny habakabaky ny distrika iray ary ohatra mandeha isan-taona dia azonao atao ny manapa-kevitra ny hiala amin'ny toetrandro mahatsiravina toy izany na mikasa hankasitraka izany. Ny zavatra iray dia tsy misy fisalasalana: mila pasipaoro manan-kery ianao ary Visa any India ho tonga, na inona na inona.
Mitovy aminao ihany ny olona iray izay tia oram-batravatra sy aleony andro aloka, ny fitsidihana an'i India mandritra ny vanim-potoanan'ny oram-baratra dia fotoana mety aminao! Tena mahagaga ny fanombohany. Noho ny halavirana misy fahasamihafana lehibe amin'ny an'i Himalaya, rahona matevina manarona an'i India sy ny lemaka ary ny lembalemba any India ary tsy afaka misandratra ambonin'ny tendrombohitra.
Ny rivotra mafana sy mafana avy any amin'ny ranomasina dia manidina mianavaratra ary hikarakara hatrany ilay faritra. Manomboka manodidina ny voalohany Jona, ny distrika atsimo indrindra an'ny Manomboka mahita oram-batravatra i India miaraka amin'ny sisa tavela amin'i India manaraka ny fivorian'ny volana Jolay. Tsy tapaka mihidy amin'ny fotoana sasany amin'ny volana septambra sy oktobra miankina amin'ny toe-tsain'ny natiora.
Ho anao izay misalasala ny handehanana mandritra ny oram-batravatra orana maharitra mandrakizay izay manondraka ny tanin-tany indraindray, misy zavatra roa tsy tokony hohadinoina:
• Tapaka ny fizahantany. Tsy ny olona rehetra no sahy ary vonona hando mando amin'ny fotoana samihafa mandritra ny andro. Amin'ireto andalana ireto, avy eo, ny andiam-boaloboka dia miaritra kokoa amin'ny toerana manintona fanta-daza.
• Sidina fiaramanidina mora vidy. Androany, tsy miseho matetika io fitenenana io ary afaka mahazo hehy roa avy amin'ilay mpikaroka mahazatra, FA, ny fitsangatsanganana any India mandritra ny oram-baratra dia ho mora vidy kokoa. Raha toa ka azonao atao ny mandresy ny ranonorana vitsivitsy milatsaka eo an-dohanao dia mamandraha izao!
• Sarintany sy ny olona eo an-toerana bebe kokoa. Ny voninahitry ny natiora dia mipoitra tanteraka mandritra ny vanim-potoanan'ny blustery ary tonga tampoka ny olona eo an-toerana! Raha toa ianao ka karazana olona manome lanja ny feo manankarena sy ny seho mivantana, fotoana mety tsara io. Ary koa, ny fihenan'ny fahatsapana ny fomba fiainan'ny tsirairay sy ny fahazoana fotoana hifandraisana amin'izy ireo dia mihombo folo!
Mba hisorohana ny fandavana ny fangatahana e-Visa karana anao dia mila mahafantatra antsipiriany vitsivitsy ianao. Raha mbola manana fanontaniana ianao dia manorata info@evisa-india.org.in or mangataka eto amin'ny Application Visa any India ho an'ny fizotran'ny fampiharana tsotra, mirindra ary mitarika amin'ny fangatahana Indian Visa Online. Contact Mpanohana Visa Indiana Visa raha misy tari-dalana